7 Khalad Oo Aad Ku Qaadi Doonto Waxqabadka Suuqgeynta | Martech Zone
7 Qalad Oo Aad Ku Sameyso Waxqabadka Suuqgeynta
Khamiista, Noofembar 23, 2017 Talaado, Nofeembar 28, 2017 Sam Melnick
Miisaaniyadaha CMO way sii yaraanayaan, maadaama suuqleyda ay la halgamayaan bisayl maaliyadeed, sida uu sheegay Gartner. Iyada oo si weyn loogu fiirsanayo maalgashigooda sidii hore, CMOs waa inay fahmaan waxa shaqeeya, waxa aan ahayn, iyo halka ay ku bixinayaan doollarkooda soo socda si ay u sii wadaan inay hagaajiyaan saameynta ay ku leeyihiin ganacsiga. Gali Maareynta Waxqabadka Suuqgeynta (MPM).
Waa maxay Maareynta Waxqabadka Suuqgeyntu?
MPM waa isku darka geedi socodka, teknolojiyada, iyo ficilada ay adeegsadaan ururada suuq geynta si ay u qorsheeyaan howlaha suuq geynta, qiimeeyaan natiijooyinka ka dhanka ah yoolalka la dejiyay, iyo sameynta go'aamo saameyn badan leh.
Si kastaba ha noqotee, maanta, kaliya 21% shirkadaha ayaa awood u leh inay si buuxda u fahmaan wax ku biirinta Suuqgeynta ee dakhliga, sida laga soo xigtay Daraasadda Waxqabadka Suuqgeynta 'Allocadia' ee Daraasadda Halbeegga ee Qiyaasta 2017. Daraasadani waxay si qoto dheer u qodday dhibaatada wada hadalada tayada leh ee hogaamiyaasha CMOs iyo sidoo kale sahan tiro badan.
Afarta Cunsurood ee Guusha ee Suuqgeyaasha Waxqabadka Sare
Guud ahaan, inkasta oo wershaddu ay weli hayso shaqo badan oo ay ku hagaajineyso korsashada iyo qaan-gaarnimada MPM, waxaa jira ururo hormood ah oo jaangooyo u dejinaya dhiggooda.
Waxaan u helnay dhowr arrimood oo guul wadaag ah suuqleydan waxqabadka sare leh:
Diirad saar xoog leh oo ku saabsan xogta hawlgalka asaasiga ah; maalgashi, soo celin, iyo aragtiyo istiraatiiji ah oo ku saabsan xogta sida ROI.
Isticmaalka joogtada ah ee teknoolojiyada adduunka, iyo isdhexgalka dhammaan qaybaha tiknoolajiyadooda.
Si taxaddar leh u nadiifinta ilaha xogta.
Cabbiraad cadeyneysa qiimaha ay u leeyihiin ganacsiga iyo himilooyinkiisa.
Daraasadda ayaa sidoo kale daahfurtay toddobo qalad oo muhiim ah oo ay ururradu samaynayaan markay la xiriirto MPM:
Tiknoolajiyad aad u da 'weyn - Kooxaha iibku waxay ku tiirsan yihiin hal-abuurka nidaamyada casriga ah ee CRM. Dhaqaalaha waxaa maamuli jiray nidaamyada ERP sanado badan. Si kastaba ha noqotee, 80% ururadu wali waxay adeegsanayaan Excel si uun si ay ula socdaan saameynta Suuqgeynta ganacsiga. Daraasaddeennu waxay ogaatay in 47% ururradu aysan isticmaalin wax kasta oo tiknoolajiyad ujeeddadeedu dhisan tahay markay tahay qorshaynta ama maaraynta maalgashiga (hawlaha muhiimka ah ee Maareynta Waxqabadka Suuqgeynta). Maareynta Waxqabadka Suuqgeynta 3.5X in badan oo ka badan kuwa leh koritaanka fidsan ama taban.
Qiyaasaha suuq-geynta ee sida fudud u ah ma wax qabad leh - Daraasaddeennu waxay ogaatay in kaliya 6% suuqleyda ay dareemayaan in cabirradooda ay ka caawinayaan go'aaminta tallaabada xigta ee suuqgeynta ugu wanaagsan. Taasi waxay ka tagaysaa 94% kuwa ku jira daraasaddeenna iyaga oo aan lahayn hagitaan qoritaan ah oo ku saabsan halka ay ku kharash gareeyaan miisaaniyadooda kooban iyo ilaha dhaqaale.
Sifooyinka MPM waxay si aad ah uga duwan yihiin kuwa cabirka suuqgeynta. Haddii cabbirka suuqgeynta B2B uu matalayo waxa darawalku ku arko muraayadda muraayadda gaariga, markaa MPM waxay u adeegtaa sidii nalka hore iyo isteerinka gaariga laftiisa oo hagaajinaya aragtida iyo xakamaynta darawalka. Allison Snow, Falanqeeye Cilmi-baaris Sare, Forrester
Khaldan u dhexeeya Suuqgeynta iyo ganacsiga - Shirkadaha filaya in ka badan 25% kobaca dakhliga ayaa laba jibbaar u badan inay yeeshaan warbixinno heer CMO ah oo muujinaya tabarucaadda Suuqgeynta ee ganacsiga. Ganacsiyadan koritaanka sare waxay ku dhowdahay 2.5X inay ka dhowdahay ururada waxqabadka liita si ay u arkaan labadaba suuq geynta iyo xogta iibka had iyo jeer ama inta badan la jaan qaada ujeedooyinka guud ee shirkada. Taasi waxay ka dhigan tahay hoggaamiyeyaasha MPM inay leeyihiin shaqooyin dakhli oo meheraddu ku shaqeyso tallaabo-qaadasho ujeeddooyinka shirkadda.
Dhibaatooyinka xiriirka CFO iyo CMO - Ururadii ugu fiicnaa ee daraasaddeena waxay ahaayeen 3X oo u badan inay iswaafajiyaan howlaha Suuqgeynta iyo Maaliyadda. Si kastaba ha noqotee, kaliya 14% ururada suuq geynta guud ahaan waxay u arkeen Maaliyad inay tahay lammaane istiraatiiji ah oo lagu kalsoon yahay, iyo 28% midkoodna wax xiriir ah lama laha dhaqaalaha ama waxay hadlaan oo keliya markii lagu qasbo. Tani waa mid aad khatar u ah maadaama Suuqgeyntu u shaqeyso si loo sugo miisaaniyadaha ku habboon, waxayna xaddideysaa aragtida Suuqgeyntu inay tahay qeyb istiraatiijiyadeed ee ganacsiga. Kalsoonida CFO waxay muhiim u tahay CMO-da maanta. Marka la barbardhigo kuwa waxqabadka hooseeya, daraasaddeena waxay ogaatay in ururada koritaanka sare ay la shaqeeyaan Maaliyadda si ay ula socdaan maalgashiga iyo cabbiraadaha (57% marka loo eego 20% shirkadaha leh koritaanka toosan / taban). Waxay sidoo kale aad ugu habboon yihiin inay la jaan qaadaan Dhaqaalaha cabbiraadaha miisaaniyadda iyo soo noqoshada (61% marka la barbar dhigo keliya 27% shirkadaha la kulma koritaanka fidsan ama taban.)
Maalgashi liita, miisaaniyada, iyo tayada xogta qorshaynta - Tayada xogta (oo laxiriira maalgashiga, miisaaniyadaha, iyo qorsheynta) waa caqabad guud oo ka dhexjirta ururada, taas oo xadideysa warbixinta iyo awooda lagu gaari karo go'aanada suuqgeynta. Kaliya 8% ururada ayaa leh suuq geyn, iibin iyo xog maaliyadeed hal bakhaar xog oo u shaqeeya sidii "il keliya oo run ah." oo kaliya 28% ayaa dareemaya in xogta suuqgeynta ay kujirto oo si wanaagsan loo qaabeeyey (tan waxaa kujira 8% bilowga ah).
Muuqaal la'aan metrik aasaasiga ah - Kaliya 50% ururadu waxay soo sheegaan inay yeeshaan aragti buuxa, ama ka sii wanaagsan yihiin, metrikada aasaasiga ah ee suuq geynta. 13% kuwaa waxay soo sheegeen inaysan xitaa garanaynin meesha xogtooda oo dhami ku nooshahay oo aysan ordi karin wixii warbixin ah. Ouch.
Isticmaalka aan habooneyn ee Martech - Shirkadaha sida joogtada ah iskudhafka tikniyoolajiyada uga shaqeeya guud ahaan ururkooda suuq geynta waa 5X oo ay u badan tahay inay arkaan 25% + kobaca dakhliga marka loo eego kuwa leh koritaan toosan ama taban (57% iyo 13%). madal otomaatiga ah halkii ay ka ahaan lahayd saddex iibiyeyaal kala duwan oo ku baahsan ururka) ayaa isbeddel keenaya. Qiyaastii 60% ka mid ah shirkadaha rajada ka qaba kororka miisaaniyadda in ka badan 10% ayaa ka warbixinaya adeegsiga tikniyoolajiyadda suuqgeynta ee ururada oo dhan inay ahaato mid had iyo jeer ama isdaba joog ah, marka loo barbardhigo 36% ka mid ah kuwa guryaha ku leh koritaanka xun. waxay leeyihiin cadayn wanaagsan ama aad u wanaagsan khariidadooda tiknoolajiyadda suuqgeynta, oo ka soo horjeedda 70% kuwa leh filashooyinka koritaanka xun.
MPM waxay ubaahantahay CMO kasta
Suuqgeyntu waa inay hadda fiirisaa ururkooda sidii ganacsi, oo aan si fudud shaqo uhelin. Waa inay sameeyaan tirinta dollar kasta si loo kordhiyo waxqabadka kooxdooda loona caddeeyo saamayntooda.
Maamulayaasha guud waxay filayaan in CMO-yada ay si fudud u falanqeyn karaan sida saxda ah suuq geynta wax ku biirinaysa qeybta hoose. Marka CMO-yada ay helaan xogta, wax walba way isbadalaan. Fiiri CMO Jen Grant, ee a wareysi dhowaan uu la yeeshay CMO.com
CMO-yada ku guuleysta tan waxay kasbadaan kalsoonida iyo kalsoonida asxaabtooda, iyo amniga si loo ogaado dadaalkooda ayaa la cabbiraa oo la qiimeeyaa. Kuwii ka dhacay waxaa loo igmaday qaadashada amarrada iyo fulinta, halkii ay istiraatiijiyad iyo hoggaamin lahaayeen. Si aad wax badan uga ogaato MPM:
Soo Degso Warbixinta Qiimaynta oo Buuxda
Tags: allocadiasuuqleyda waxqabadka sare lehJen Granthalbeegga suuqgeynta bisaylkamaaraynta waxqabadka suuqgeyntabiseylka waxqabadka suuqgeyntampm
Sam Melnick waa kuxigeenka suuq geynta Allocadia, Hogaamiyaha softiweerka Maareynta Waxqabadka Suuqgeynta, maareeynta in kabadan $ 20B ee suuqgeynta kubixiso ilaa taariikhda. Isagu waa abaalmarin-ku-guuleyste iyo xirfadle suuq-geyn ah oo suuq-geyn ah oo khibrad u leh sida suuq-geynta suuq-geynta Vivox, falanqeeyaha warshadaha CMO ee IDC, iyo maareeyaha guusha macaamiisha ee Lattice Engines. Sam waa nin ku hadla had iyo jeer dhacdooyinka warshadaha suuqgeynta iyo qoraa caan ah oo ka tirsan cilmi baarista suuqgeynta. Waxaa loo aqoonsaday inuu yahay kan ugu sareeya 50 xirfadle tikniyoolajiyadeed ee ugu saameynta badan, oo lagu daray mid ka mid ah 40-ka sare ee New England ee saameynta ku leh waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo suuqgeynta dhijitaalka ah. Sam wuxuu ka qalin jabiyay UMass Amherst Isenberg School of Management.